Ongakhuluma ngakho nentombazane: amathiphu namasu amahle kakhulu Amadoda aSitayela
Yini okufanele ukhulume nentombazane ngayo
IsiJalimane Portillo | 07/06/2021 10:51 | Izithandani Nezocansi
Impela kuke kwenzeka ukuthi uke waba nosuku nentombazane futhi awazi kahle ukuthi ungaya kanjani ezingxoxweni. Ukugwema ukuthuliswa okungathandeki kungaba ukhiye wosuku oluhle nombono omuhle. Ngakho-ke, uma ungazi okufanele ukhulume nentombazane ngakhoKufanele wazi ukuthi kunezingqinamba ezithile ezinconywa kakhulu ukuthi ubhekane nazo, yize kubalulekile ukuthi uguquguquke ngokuphelele ngoba akubona bonke abesifazane abafanayo futhi kufanele uthole okuvumelana kukho kokubili.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela okufanele ukhulume nentombazane ngakho ukuze usuku luhambe kahle.
1 Yini okufanele ukhulume nentombazane ngayo
1.1 Ukuhamba nezinkanuko
1.2 Buza ngemisebenzi yabo
1.3 Ongakhuluma ngakho nentombazane: izilwane ezifuywayo nokudla okuthandayo
1.4 Imibuzo enobungozi
Ukuqomisana nothile okokuqala kungaba nzima kakhulu. Ngaphezu kwalokho okulindele, ingcindezi yokukuthanda nokwenza ukuxhumana okuhle inkulu kakhulu. Zonke lezi zinkathazo zizokwenza umhlangano awuhambanga kahle, ngoba umuntu akakwazi ukuthola indlela yokuziveza noma ukukhombisa intshisekelo kwelinye iqembu. Lezi zimo ezingakhululekile zigcina zichithe ithuba lokuzazisa. Ake sibone ukuthi yiziphi izihloko eziyinhloko intombazane engakhuluma ngazo ngokujwayelekile.
Uma ungazi ukuthi uzokhuluma ngani nentombazane, cishe wonke umuntu uyathanda ukuhamba. Kokunye kokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu emhlabeni futhi kungasiza kakhulu ukwazi umuntu. SUma umuntu engathandi ukuhamba, kungashiwo okuningi ngezintshisekelo zabo, izifiso zabo kanye nokuqagela kwempilo. Kodwa-ke, into ejwayelekile kakhulu ukuthi uma ungibuza ngohambo benze amava abo futhi babheke ama-anecdotes ajwayelekile.
Izinkanuko zibalulekile ekwazini umuntu. Kufanele uthole ulwazi noma izinga lomuntu siqu njengoba ingxoxo igeleza. Ngale ndlela, uyazi ukuthi yimiphi imizwa enamandla kakhulu nokuthi ungumuntu ozimisele futhi onomdlandla yini. Ngalokhu ungathola ukuthi izintshisekelo zabo ziyahambisana yini nezakho. Ukuhlangana nentombazane akubalulekile ukuthi unezintshisakalo ezifanayo, kepha kubalulekile ukuthi zihambisane nezakho.
Esinye isici esiyisisekelo esibalulekile ngosuku ukuthi ubuza ukuthi uhlalaphi. Kungenzeka ukuthi umusha edolobheni, noma uhlale endaweni efanayo iminyaka eminingi. Lokhu kungasiza ukusungula ingxoxo mayelana nezinto ezithandwa yithina kanye nezinto ozithandayo ngokwesiko, obajwayele, abangani, amasiko noma imikhuba yomuntu siqu. Uma ukwazi ukuphatha ingxoxo kahle, bangakwazi ukwazi futhi babone ukuthi abakuthandayo kuyafana yini nokwakho. Ngale ndlela ungathola imibono yokumyisa ngosuku lwesibili olukuvumela ukuthi wazi okuningi ngengaphakathi lakhe.
Buza ngemisebenzi yabo
Uma ungazi ukuthi uzokhuluma ngani nentombazane, ukubuza ngemisebenzi yakhe nangendlela ahlela ngayo impilo yakhe yansuku zonke nempilo yakhe yansuku zonke kungathakazelisa ukufunda kabanzi ngaye futhi ukhombise ukuthi unentshisekelo. Ungabazisa ukuthi basebenzisa isikhathi sabo kuphi. Ungazi futhi ngomsebenzi wakho ngazo zonke izintshisekelo zakho futhi ukhululekile ukuqondisa amandla akho nezibopho onazo empilweni yakho yansuku zonke. Ngale nkulumo ungazi uma kunjalo owesifazane okhuthele noma ongenzi lutho, uma enemisebenzi eyengeziwe efana nohlobo oluthile lokuzilibazisa noma umdlalo anikela ngesikhathi sakhe kuwo. Uma abangane bakhe noma umndeni wakhe ubalulekile kuye noma uma ezibophezele kunhloso ethile.
Esinye isici sokufunda ukuthi ungakhuluma ngani nentombazane ukubuza ngesikhathi sakhe sokuphumula nangezimpelasonto. Iningi labantu liyakhipha emsebenzini ngempelasonto futhi yilapho-ke lapho sinesikhathi samahhala kakhulu. Uma ubuza imibuzo ajwayele ukuyibuza ngezimpelasonto, ungathola umbono ngezintshisakalo zakhe nezinto azithandayo bese uthola ukuthi ziyahambisana yini nezakho ngezikhathi zokuphumula.
Lapho umuntu engafanele ukusebenza kuvame ukunikela ngesikhathi sakho namandla ezintweni ozithandayo. Ngakho-ke, ungabazi ubuntu ngaphezu kwemikhuba kanye nesigqi sansuku zonke.
Ongakhuluma ngakho nentombazane: izilwane ezifuywayo nokudla okuthandayo
Yizihloko ezimbili zengxoxo okufanele ziphume cishe ngokuzibophezela. Cishe abantu abaningi bayazithanda izilwane ezifuywayo futhi kuyisihloko esingaveza ukuxhumana okukhulu phakathi kwenu nobabili. Izilwane zivame ukuvusa imizwa emihle kakhulu kumuntu. Kule ngxoxo umbuzo mayelana nesilwane asithandayo angahle ubonakale, ukwazi ukuthi izilwane ezifuywayo zibalulekile kuye nokuthi uqhathanise uma unazo noma uyazithanda. Iphinde ikuvumela ukuthi wazi ingxenye yempilo yabo esondelene futhi wazi ukuthi ngabe iyahambisana yini nokuthanda kwakho.
Ngakolunye uhlangothi sinombuzo ngokudla okuthandayo. Uma ubabuza ukuthi yikuphi ukudla abakuthandayo, ukhuluma ngomuntu osangene ongakwazi ukudlala kakhulu futhi kuyathakazelisa ukwazi kabanzi ngakho. Futhi kukhona isayensi ngemuva kwalombuzo. Kunezifundo ezithile ezenziwa ngongoti bezengqondo eziveze ukuthi abantu abathanda ukudla okumunyu okufana necocoa engenashukela nama-radishes bangaba nokuziphatha nemicabango ethize. Yize lokhu kungafanele kuthathwe ngokweqile, kulula ukukukhumbula.
Ngaphambi kokudlulela emibuzweni eyingozi, kubalulekile ukwazi ukuthi wenzani. Ukwazi umsebenzi wabo ungaba nezimpawu ezicacile mayelana nokuthi indlela yabo yokuphila injani. Ungayazi imvelo lapho ihamba khona, umbono wohlamvu lwayo, abantu abasendaweni yayo, njll. Uma ungibuza ukuthi uyawuthanda yini umsebenzi wakhe noma umsebenzi abekade ephupha ngawo, uzokwazi ngezifiso zakhe, izinkanuko nemicabango yakhe.
Ngokuphathelene nemibuzo eyingozi, ungabuza ukuthi mingaki imibhangqwana ayenayo ngaphambili noma ukuthi yimiphi ebiphila maqondana nezihloko ezithile ezinempikiswano. Ngale ndlela, ungakha ingxoxo ekhangayo ezoshiya indawo yakho yokunethezeka futhi ikuvumele ukuthi uyazi ngaphezu kwemibuzo engasho lutho. Ngakho-ke ungabona ukubukeka okuthembekile ngokwengeziwe endleleni yabo yokuphila.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi uzokhuluma ngani nentombazane ukuze usuku luhambe kahle.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Yini okufanele ukhulume nentombazane ngayo
Isudi emhlophe yomkhwenyana